-Inthanethi ibamba - kusho ukubeka ulwazi World Wide Web. Ngemva kokukhishwa kukamagazini i ka yithuluzi Inthanethi iseva amakhompyutha inkampani-host yimuphi umsebenzisi ungathola kuwebhu lamandla, ngokumane ukuthayipha yekheli igama lakhe lesiphequluli. Ukufinyelela isayithi inikezwa nganoma isiphi isikhathi, ngaphandle kweziphazamiso ezincane zokuvimbela nokugcinwa amaseva. Nokho, ngezinye izikhathi Hoster namanje kuqinisekisa ukutholakala okuqhubekayo web-imithombo.
Ukuze wenze yithuluzi online litholakale emphakathini, kufanele uqale ukwakha kule webhusayithi.
Serious web-isisetshenziswa ngaphambilini athuthukile kukhompyutha wendawo futhi eziningi amafayela software, abezindaba, html nombhalo. Le ndlela pre-ukuthuthukiswa kwendawo kwenza kube nokwenzeka ukuba sifinyelele ukusebenza yayo elikhulu, ngokwezifiso futhi okwakhe.
Manje ukulungiswa kanye nokubhaliswa izinsiza Inthanethi avame ukusetshenziswa CMS amaningi - izinhlelo ezihambisa le nqubo eside futhi eziyinkimbinkimbi. Ukusebenzisa uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe, noma "izinjini 'njengoba bebizwa esivame ukubizwa ngokuthi abasebenzisi, ikuvumela ukuba ukushintsha abanye imisebenzi eziyinkimbinkimbi elihlobene ne-ukudalwa kanye nomklamo web-imithombo. Futhi, ezinye-CMS eziphambili uyakwazi kahle hle ukusabalalisa amawebhusayithi umthwalo iseva esingethe. Phela, ezinye izinkampani ibamba ninikeza ibamba nge-CMS ngomumo eyenziwe. Ikhasimende akudingeki kuphela ukunquma - lokho kudinga isevisi yokubamba. amasevisi Hosting ukusingatha isayithi yenkampani noma gallery isithombe, ingenisa izithombe, imibhalo, imiqophi, imidlalo, amafayela alalelwayo, amafayela isicelo - lazo zonke lezi zinto ngokuvamile inokudla kakade walungisa.
amasevisi engeziwe ibamba ezidinga ukugcinwa kwamakhilomitha emikhulu Inthanethi-Intanethi, ukubandakanya traffic abalulekile futhi run afune izinto ngenkani kwabanye izinsiza isofthiwe. Noma kunjalo, abasebenzisi abavamile uzokwazi ukusingathwa uhlelo ethengekayo ukuze kukhawulwe futhi. Ngaphezu kwakho konke, kumayelana Blogger - abantu ukugcwalisa idayari inthanethi kumawebhusayithi ehlukile. Iqiniso lokuthi leli sayithi itholakala ku ulwazi umbhalo akudali i anokulanda ezinkulu. Ezinye Sebawoti ngisho ukunikeza ukusingathwa khulula for Blogger futhi technical support. Ngeshwa, amasevisi afana ibamba ngezinye izikhathi angadingeki zisebenzisa, ukugcwalisa izikhala zokukhangisa intanethi namanye engenamsebenzi akusebenzi 'ulwazi'. Ngenxa yalokhu izinkampani ibamba ngokuvamile bayakwazi ukunikeza ukusingathwa khulula nje endaweni ethileko na, isikhathi esilinganiselwe. Ukuze bagweme ukubanjwa okunjalo uyakwazi okwesabisa away "vareznikov", "adaltschikov" satellitostroiteley, alalelwayo bemikhumbi, "lohotronschikov", "angadingeki", "dorveyschikov" kanye nezinye "Abadali" abazi lutho amawebhusayithi ngokuqukethwe eziyingozi kakhulu futhi ezephula umthetho.